mairie-antananarivo – Fankalazana ny andro iraisam-pirenena momba ny fiatrehana ny loza voajanahary CUA
Fankalazana ny andro iraisam-pirenena momba ny fiatrehana ny loza voajanahary CUA
auteur 13 octobra 2016 Commentaires fermés
Nosokafan’ny Ben’ny Tanàna Lalao Ravalomanana tamin’ny fomba ofisialy androany teo amin’ny Parvis Lapan’ny Tanànan’Antananarivo ny fakalazanan’ ny Kaominina ny andro iraisam-pirenena ho fihatrehana ny loza voajanahary. Marihana ihany koa fa ny 13 oktobra no andro voatokana anaovana izany isan-taona. Nambaran’ny Ben’ny Tanàna, Ramatoa Ravalomanana, fa mila miomana isika amin’ny fiatrehana ny loza. Araka ny voalazan’Atoa Ban Kin Moon, Seketera jeneralin’ ny firenena mikambana dia: « Tsy ho vitantsika ny manafoana ny rivo-doza fa ny fiomanana dia efa mampihena ny voka-dratsiny. »
Nilaza ihany koa ny Ben’ny Tanàna fa fanentanana ny olona no natao androany ary ny Kaominina Antananarivo Renivohitra dia vonona sy handray andraikitra mivantana, mba hisy fiantraikany amin’ireo mponina manorim-ponenana eny amin’ny faritra iva sy ireo toerana atahorana ho diboky ny rano. Araka ny voalazan’ny olona, hoy izy, dia ireo fanotofana tany no tena mahatonga ny tondra-drano ka ilaina ny manao taratasy fitarainana, ahafahana mijery haingana ny olana.
Voalaza koa fa miainga eny an’ivon’ny fokontany ny fitarainana amin’ireo zava- misy sy ny olana rehetra mety atahorana, ary ampitaina any amin’ny delegen’ ny boriboritany izany, izay vao raisin’ny Teknisian’ny Kaomonina an-tanana. Mety ho betsaka ny fandravana atao amin’ny fanorenana araka ny tatitra sy ny zava- misy mety hitera- doza eny amin’ny Boriboritany eny. Marihana ihany koa fa efa vonona ny Kaominina Antananarivo Renivohitra amin’ny hoenti-manana amin’ny fiatrehana ny loza voajanahary, miara-miasa amin’ny CARE/GIZ/BNGRC/DISTRIKA indrindra ny mpamonjy voina.
Noho izany, dia nanao hetsika fampisehoana an-kira , fanentanana ho an’ny olona ihany koa I PRINCIO sy ireo artista isan-karazany amin’ny fiomanana ho fiantrehana ny loza. Teo ihany koa ny fampisehoana fampirantiana trano heva mikasika izay, ary nandray anjara ny mpamonjy voina, naneho ireo fitaovana famonjena voina sy ny fanaovana « interventions » ary nanome fiofanana ho an’ny olona, sy ny tokony ataony raha sendra tojo ny loza. Marihana fa manao fanentanana eny an’ivon’ny tsena, sy ny faritra ambany toerna ireo mpamonjy voina.
Noho izany, dia aoka isika tsirairay mba samy tompon’andraikitra amin’izay zava- misy rehetra fa tsy faly ny hanome tsiny ny hafa dieny mbola misy ny fotoana hiomanana. Nisaotra sy nankasitraka ny GIZ, sy ireo mpiara- miombon’antoka rehetra, toy ny CARE Internationale, USAID, ny vondrona iraisam-pirenena… sy ireo maro samihafa ny Ben’ny Tanana Lalao Ravalomanana. Mangataka amin’Andriamanitra isika, hoy ny Ben’ny Tanàna, mba ho kely sy tsy hisy mihitsy ny tondra-drano na ny loza voajanahary mety hahazo antsika.